Guddoomiyaha aqalka sare oo baaraya eedeymo loo jeediyay qaar ka mid ah senetarada dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiyaha aqalka sare oo baaraya eedeymo loo jeediyay qaar ka mid ah senetarada dalka
Star FM August 26, 2018
Guddoomiyaha aqalka sare ee dalka Mr.Kenneth Lusaka ayaa isugu yeeray xubno ka mid ah senetka si baaritaano loo sameeyo eedeymo la xiriira laaluush qaadasho oo loo soo jeediyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta wadanka.
Arrintan ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in senetarada qaar ay dalbadeen in laluush la siiyo si ay saameyn ugu yeeshaan natiijada baaritaano ku aaddan lahaanshaha dhulka muranka dhaliyay ee degaanka Ruaraka ee Nairobi.
Ganacsade lagu magacaabo Francis Mburu oo sheeganaya inuu leeyahay dhulkaasi ayaa ku andacoonaya in xubnaha guddiga xisabaadka iyo maalgashiga ee aqalka sare ay weydiisteen laalush dhan 100 milyan oo shilin.
Ken Lusaka, guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in maalinka talaadada ah uu kulan la yeelanayo guddi ka kooban 7 xubnood si eedeymahaasi loo eego.
Isniintii hore ayay ahayd markii guddoomiyaha guddiga xisabaadka iyo maalgashiga ahna senetarka ismaamulka Homa Bay, Moses Kajwang’ uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyay xubnahaasi.
Waxaa uu hadalka ka soo yeeray Mr. Mburu ku micneeyay mid lagu doonayo in lagu weeciyo diiradda ay dowlada saartay la dagaalanka musuqmaasuqa.
← Booliska oo xiray 25 qof oo ajaniib ah
DHAGEYSO Guddoomiyaha Mombasa oo ku baaqay in dowlada lagu tageero la dagaalanka musuqmaasuqa →